Iindaba -umahluko phakathi kweselfinji yokutshixa i-luer kunye nesirinji yeslip-islip
Umahluko phakathi kwesirinji esitshixwayo se-luer kunye nesirinji esliphelayo
Isirinji yesitshixo seLuer isetyenziswa kakhulu kumazwe asentshona. Kwinkoliso yamazwe asaphuhlayo, isirinji eslip esithandwa kakhulu ngenxa yexabiso eliphantsi.
Uyilo lwesiliphu se-luer lukhangeleka lulula-ungayifaka nje. Kodwa oku ayikuko ukulungelwa, kodwa ingxaki enkulu yezonyango enxulumene nokuba ingaba isigulana singanikwa idosi echanekileyo na ngokuqhubekayo ukumiliselwa kweziyobisi. Oku kuchaphazela nonyango lokugqibela lwesigulana.
Nangona isirinji yokutshixa i-luer ifuna inyathelo elongezelelweyo lokuba umongikazi ayikrwele ngaphambi kokuba ayisebenzise, ​​iqinisekisa unxibelelwano oluqinileyo kunye nokhuseleko kubo bobabini abagqirha kunye nezigulana. Nokuba iyaqhagamshela kwisinxibelelanisi sokungeniswa ngenaliti okanye imibhobho eyahlukeneyo, uqhagamshelo alunakunqanyulwa ngokulula phantsi kweemeko ezahlukeneyo. Iqinisekisa ukuba yonke inkqubo yonyango ihamba kakuhle! Ngokuthintela ngempumelelo amathuba wedosi yeziyobisi engachanekanga, ukutshiza iziyobisi, kunye ne-embolism yomoya.
Kwezi meko zilandelayo zesicelo seklinikhi, isirinji ye-luer-lock iyacetyiswa kakhulu:
Xa kulungiswa iziyobisi ezinetyhefu, isebe longenelelo litofa iziyobisi ezinobungozi (njenge lipiodol). Ukuba isirinji inqanyulwe ngengozi ngexesha lokusetyenziswa, iziyobisi eziyityhefu zichithwe ngengozi.
2 Xa i-hemodialysis idityaniswe nesirinji, iya kubangela i-heparin okanye ukuphuma kwegazi kumbhobho ukuba imeko yesigulana iyatshintsha ,;
Amasebe apho kunikezelwa khona amachiza amaninzi ngexesha lokufakwa kwenaliti ye-bolus, enje ngesebe likaxakeka, i-ICU, njl .; Ukungena ngaphakathi okutsha okufuna inani elikhulu lezitofu ezifakwa ngaphakathi, ezinje nge-furosemide okanye uxinzelelo lwegazi olwehlisa iziyobisi. Idosi yentsusa incinci. Xa isirinji idityaniswe nenaliti yokuhlala kunye nesinxibelelanisi sokungeniswa kwenaliti ngempazamo sityibilikisiwe saza sanqanyulwa, idosi yeziyobisi ayinakuqinisekiswa
4 Xa uqhagamshela kwi-catheter ye-venous esembindini, isirinji-kwisirinji inokunciphisa umngcipheko womoya obangelwa kukuqhawulwa
Ngaphezulu, kuyilo lwesiliphu esiluhlaza, kunokwenzeka ukuba unqamle kwaye uqhekeze ngexesha lenkqubo yokutsala. Xa usebenzisa uyilo lwezibuko ezijijwayo, musa ukulujija kakhulu. Ngaphandle koko isikrufu sinokuqhekeka kwaye akusayi kuba lula ukususwa, esiya kuchaphazela ifuthe lonxibelelwano.
I-Antmed ivelisa 1mL / 3mL iiserinji zokutshixa ii-luerkwaye iyakwazi ukufezekisa iiodolo ezinkulu. Sisebenza ubusuku nemini kwaye sandisa imigca yethu yefektri. Ukuza kuthi ga ngoku, sifumene i-60 yezigidi ze-1mL ze-odolo zokutshixa isirinji kwihlabathi jikelele. Nceda unxibelelane nathi ngazo naziphi na iimfuno zikaxakeka. I-imeyile yethu yile: info@antmed.com
Ixesha Post: Feb-20-2021